Isikuvuthondaba eyomhlaba kuMasipala waseMlalazi – Ubukhosi
Home/ Ubukhosi noMhlaba/Isikuvuthondaba eyomhlaba kuMasipala waseMlalazi
Ubukhosi News August 27, 2015
Ngenhla umunyu ogandaganda begugula izindlu nempahla yomphakathi
UBUKEKA usekude ukuphela umdonsiswano ngobunikazi bendawo phakathi komndeni waseShowe, uMasipala waseMlalazi kanye neBhodi leNgonyama. Lokhu kulandela ukuphawula kwaloyo oyiMeneja kaMasipala uMnu uSimon Mashabane. Ekhuluma neBAYEDE kuleli sonto uMnu uMashabane uthe: “Yindawo yethu lena laba bantu abakhe kuyo futhi sinanobufakazi bamaphepha aqinisekisa ukuthi yithi abanikazi bale ndawo. Ngeke thina sisatshiswe ngeHhovisi le-Ingonyama Trust kanye nabameli balo mphakathi ongafuni ukusuka endaweni yethu. Sizwile nje ukuthi sebesibizele abameli babo baseCape Town asinankinga abeze sibalindele. Sekohlanganwa enkantolo,’’ kuphawula uMashabane.
Kuyo le ngxoxo uMashaba uveze ukuthi empeleni njengomasipala baba nesivumelwano nomphakathi wakwaMaqedipuleti ngokuthi uzosuswa kanjani. “Sivumelene nomphakathi wakwaMaqedipuleti ngokubhidlizwa kwale mizi yabo. Angithi sibakhipha odakeni sizobahlalisa ezindlini ezinhle zesikhashana ezinogesi namanzi. Kumanje ngibahambisela izitofu zokupheka ezingama-41,’’ kusho uMnu uMashabane obe esesola umndeni wakwaManamela ngokuthungela umlilo emphakathini.
“Sesizame kaningi ukuxoxisana nalo mndeni wakwaManamela ukuba udede endaweni kamasipala kodwa ukhombisa ukuba namakhanda aqinile. NoBongi sixoxisene naye akafuni ukuzwa,’’ kuqhuba uMnu uMashabane. Ecelwa yiBAYEDE ukuba achaze ngemininingwane yokuthengiselana kwale ndawo phakathi kukamasipala kanye nabathuthukisi bayo wale waphetha ukwenaba. “Ngeke ngikwazi ukukudalulela lokho ngoba sekuwudaba oselukubameli,” kuphetha uMashabane.
Leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi uMasipala waseMlalazi uqoke abameli bakwaWyn & Wyn and Associates kanti ngakolunye uhlangothi Ingonyama Trust Board yona imelwe nguMnu uCollen Msizi Mnguni wabakwaMsizi, Mnguni and Associates. Singakuqinisekisa futhi ukuthi sekube khona ukuxhumana phakathi kwabameli nosekwenze kwamiswa nokudilizwa kwezakhiwo nesiye ukuyoshicilela isivumelwano sisamile.
Okhulumela umphakathi wakwaMaqedipuleti, uMnu uBongi Molife naye ongomunye wabasuswayo endaweni utuse ukungenelela kwe-Ingonyama Trust Board kulolu daba nathe impela umasipala ubusubashwabadela noma bayaphefumula kungenxa yokusukuma kwe-ITB.
Loyo omele i-ITB, uMnu uCollen Msizi Mnguni ukuqinisekisile ukuthi zikhona izingxoxo eziqhubekayo phakathi kwabo nabameli bakamasipala okunguWyn &Wyn and Associates.
“Impela ngiceliwe yiHhovisi le-Ingonyama Trust Board ukuba ngisize umphakathi wakwaMaqedipuleti eShowe nokuthi ngimise ukususwa kwabo endaweni yabo kuze kube kulungiswa indaba yobunikazi bendawo,’’ kusho uMnu uMnguni.
Wale waphetha ukudalula imininingwane ngezingxoxo zabo wathi ngeke akwazi ngoba lolu sekuwudaba olubucayi. “Siyokwazi ukudalulela abezindaba uma lolu daba selusenkantolo,’’ kuphetha uMnu uMnguni.
UMnu Molife uthi abazi ukuthi bebezokhoselaphi nezingane ukuba kuqhutshekiwe nokubhidlizwa kwemizi yabo. “Manje sifisa iHhovisi le-Ingonyama Trust Board lisilekelele ekutheni simangalele uMasipala uMlalazi. Sifuna amademeshe okucekelwa phansi kwemizi yethu nempahla,’’ kuqhuba uMnu Molife.